निरकुंश शासकले अब ठाउँ नपाउने : नेपाल - नेपालबहस
निरकुंश शासकले अब ठाउँ नपाउने : नेपाल
| १९:०२:०३ मा प्रकाशित
११ फागुन, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समुहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निरकुंश शासकले अब ठाउँ नपाउने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक र साहसिक भन्दै नेपालले अधिनायकवादको ठाउँ नरहेको पुष्टि गरेका हुन् ।
अदालतले संविधानका धारा-धारा हेरिकन फैसला गरेको र आँटका साथ १३ दिनभित्र बैठक बोलाउनु भनेर आदेश दिनु अर्को सकारात्मक कदम रहेको नेपालले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले झूटको पुलिन्दा बनाउने गरेको भन्दै उनले संसदलाई अस्थिरताको थलो बन्न नदिने दाबी गरेका छन् ।
हुम्लामा भूमि आयोगको कार्यालय स्थापना १९ घण्टा पहिले
दोस्रो बजारमा ६ लाख लगानीकर्ता सक्रिय, अनलाइन प्रयोगकर्ता कति ? २ दिन पहिले
निगमको थानकोट डिपोमा अब रहेन सुरक्षा चुनौती १ हप्ता पहिले
माझीले गरिखाने बगरमा कस्ले चलायो डोजर ? ४ हप्ता पहिले
कोरोना संक्रमितका घरमा स्थानीयको ताला ७ महिना पहिले
गायिका लता मंगेशकरको भवन शिल ! ६ महिना पहिले
पत्नीको उपचारका लागि प्रचण्ड भारत प्रस्थान २ महिना पहिले
प्लाज्मा बैंक बनाउन र मास्क वितरण गर्न सुझाव ६ महिना पहिले